Ny fiantraikan'ny fonosana manokana amin'ny varotra ecommerce anao? | Martech Zone
Zoma, Febroary 19, 2016 Alakamisy Febroary 18, 2016 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo fonosana voalohany nosokafako izay niavaka dia ilay MacBookPro voalohany novidiko. Nahatsapa toy ny fisokafana aho rehefa nanokatra ny boaty fanasana valizy tamin'ny solosaina finday sy kojakoja nitafy tsara ao anatiny. Fampiasam-bola lehibe io, ary hitanao ny fikarakaran'i Apple mba hahazoana antoka fa fantatro fa manokana io rehefa nanokatra ilay boaty aho.
Ny mpiara-miasa amiko dia miasa amin'ny sehatry ny famatsian-tarehy. Nasehony ahy ny toerana misy ny sasany amin'ireo vokatra izay tanterahin'izy ireo ho an'ny mpanjifany misy kaontenera, fonosana, fonosana ary boaty izay mitentina be lavitra noho ny menaka hita ao anatiny. Ary mampisy ny tsy fitoviana rehetra. Amin'ny famolavolana sy famonosana am-pitandremana ny vokatra dia azon'izy ireo atao ny mandoa hatramin'ny 4 na 5 heny ny vidin'ny menaka ara-batana! Ary manatanteraka vokatra an'arivony isan'andro izy ireo.
Efa niresaka momba ny traikefa amin'ny fiantsenana kely izahay, avy amin'ny fahitana ny fividianana atmosfera am-polony taona maro lasa izay Bokin'i Brian Solis amin'ny varotra fanandramana - manomboka miaiky ny fiverenan'ny traikefa ny orinasa.
Shorr Packaging nohadihadiana mpivarotra e-varotra olon-dehibe an-jatony misolo tena ny fiampitana amerikana. Ny tanjona dia ny hahafantarana ny safidin'ny mpanjifa manodidina ny fonosana mahazatra ary ny fiantraikan'ny fahita matetika amin'ny fiantsenana sy ny fandaniana amin'ireo safidiny ireo. Ny fanalahidy nesorina tamin'ny fanadihadiana dia ny mpiantsena premium (mpanjifa mandany $ 200 isam-bolana) manome lanja fanampiny amin'ny famolavolana fonosana mahazatra.
Ny fonosana manokana dia ny traikefa ara-pahefana voalohany ananan'ny mpanjifa e-varotra amin'ny marikao, noho izany dia zava-dehibe ny fanaovana fahatsapana voalohany tsara.
Tamin'ny fanadihadiana dia hitan'i Shorr fa ny 11% -n'ny mpanjifa ecommerce ihany no afa-po tanteraka amin'ny fonosana azony anio. Hitan'i Shorr fa ny mpanjifa miverina dia mandany 67% mihoatra ny mpanjifa voalohany izay manamafy ny maha-zava-dehibe ny fanaovana fahatsapana voalohany amin'ny fonosanao.
Sintomy ny tatitra fonosana nataon'i Shorr
Tsy ny fitondran-tena mividy ihany izany. Rehefa traikefa tsy manam-paharoa, 37% amin'ireo mpiantsena premium zarao amin'ny Internet izany traikefa izany! Na dia mety mijery ny fonosana aza ny ankamaroan'ny tontolon'ny famokarana, dia ilaina ny mijery ny fonosana mahazatra ho toy ny a -barotra fampiasam-bola. Betsaka ny toerana azo hatsaraina - 11% amin'ireo mpanjifa ihany no nilaza fa talanjona tamin'ny fonosana ny vokatra novidian'izy ireo.
Tags: andrasan'ny mpanjifafonosana e-varotraecommercefonosana ecommerceSary torohayfonosanampiantsena premiumshorr
Maninona ny Video Product no laharam-pahamehana ary karazana video 5 tokony hamokaranao